Manasongadina ny manjo ireo Kristiana vitsy an’isa ny hira iray nandeha onjam-peo Alzeriana · Global Voices teny Malagasy
Nahitana andininy miresaka Jesoa ilay hiram-pivavahana, niteraka fandroahana sy adihevitra
Voadika ny 24 Novambra 2021 3:49 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, عربي, Português, English
Miatrika fanavakavahana sy fanenjehana ireo Kristiana vitsy an'isa ao Alzeria ao anatin'ny fitomboan'ny firaketana amim-pototra sy ny tsy fahombiazan'ny governemanta amin'ny fametrahana fitovian-jo ara-pinoana. Nampiasana lisansa Creative Commons Attribution ny rakitra
Navoaka voalohany tamin'ny 22 Oktobra 2021 tao amin'ny Raseef22, sehatra fampahalalam-baovao tsy miankina ity lahatsoratra ity. Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panitsiana, araka ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tratran'ny krizy vaovao ny Kristiana any Alzeria, izay heverin'ny maro fa taratry ny tsy fileferan'ny fanjakana Alzeriana amin'ny Kristiana sy ny finoany.
Nanomboka ity olana farany ity rehefa nandefa ilay hira “Eid al-Layl” (Alin’ny Fety) nohirain’ilay mpihira malaza Fayrouz ny fandaharana maraina tao amin’ny Radio Constantine an’ny fanjakana, izay nisy andininy manao hoe: “Nitsidika ny alina i Jesoa… Nolokoin'i Jesoa ny alina.” Tsy ela taorian’izay, dia nesorina tamin’ny toerany ny talen’ny onjam-peo, Mourad Boukerzaza, rehefa avy nohadihadiana noho ny fandefasana hira sy fihirana manome voninahitra ny fivavahana Kristiana.
Niteraka savorovoro tao amin'ny pejin'ny tambajotra sosialy ny vaovao fanalana azy, teo amin'ireo manohitra izay nahita fa lasa “tahaka ny Daesh” kokoa ny firenena, sy ireo manohana ny ady amin'ny fitaomana ny olona hanaraka ny finoan'ny tena.
#Liban #Alzeria: Nilaza ny tatitra fa mpiasa maromaro ao amin'ny onjam-peo iray ao Alzeria no voaroaka taorian'ny fitarainana fa nandefa hira Kristiana nohirain'i Fairouz – ilay hoe “ô Jesoa” izy ireo
Ny fanehoan-kevitra feno hatezerana toy izany dia narahin'ny fandavana nataon’ny Onjam-peo-pirenena Alzeriana (EPRS) fa tsy misy ifandraisany ny fandroahana ny talen'ny onjam-peo sy ny fandefasana ilay hira Kristiana. Nambarany fa noho ny antony ara-pitantanana fotsiny no nanesorana an’i Mourad tamin'ny toerany.
Ankoatra ny fanambaran'ny governemanta, niharatsy ny fanilikilihana ny Kristiana Alzeriana tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary maro no nanafina ny finoany sy ny fivavahany tamin'ny mpiara-miasa aminy noho ny tahotra fanenjehana.
Tafala amin'ny fahasoavana
Na dia nitranga tamin'ny vanim-potoana Romana aza ny fahatongavan'ny Kristianisma tany Alzeria, dia ireo Eoropeana mpifindra monina tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo no nitondra ity fanavaozana maoderina ity indray. Nanangana fiangonana, sekoly ary tobim-pahasalamana ireo Eoropeana vao tonga ireo, ka nahatonga ireo Miozolomana Alzeriana maromaro niova ho Kristiana, indrindra tany amin’ny faritra avaratr’i Kabylia izay miteny Berber.
Nandritra izany fotoana izany, ny Kristiana Katolika avy any Eoropa no nanana ny herijika betsaka indrindra hahazoana ny toerana ambony ao amin'ny governemanta, sy ny fahazoana tombony lehibe tamin'ny toe-karena Alzeriana.
Nanamarika ny fiafaran'ny vanim-potoana volamena ho an'ny Kristiana ao amin'ny firenena ny fahaleovantenan'i Alzeria tamin'ny 5 Jolay 1962. Nanondro ny antontanisa fa ny 12 isanjaton'ny mponina ao amin'ny firenena no Kristiana tamin'izany fotoana izany, saingy nahatratra 800.000 ny Kristiana nanorim-ponenana no nafindra tany Frantsa taorian'ny fahaleovantena; 200.000 no nanapa-kevitra ny hijanona tao Alzeria.
Rehefa nandeha ny fotoana, nihena ho iray isanjato monja sisa ny isan’ny mponina Kristiana tany Alzeria noho ny fameperana nitombo izay nivadika ho herisetra tatỳ aoriana.
Tamin'ny nahazoan'ny Islamista vahana tany Alzeria, ary ny fironana Salafi nanjary nanjaka tao amin'ny firenena, tsy ny fananan'ny Kristiana ihany no tandindonin-doza, fa ny ain'izy ireo ihany koa: nanomboka lasibatry ny mahery fihetsika ny mpikambana ao amin'ny mpitondra fivavahana Kristiana.
Tamin'ny taona 1962, nahafatesana olona miisa 95 ny vono olona tao Oran , izay avy any Eoropa ny ankamaroany. Tamin'ny taona 1996, moanina Tibhirine miisa fito no nalaina an-keriny tany Alzeria ary novonoin'ny Vondrona Islamika Mitam-piadiana (Groupe Islamique Armé, GIA). Tamin'io taona io ihany no nahitana fipoahana izay nikendry ny fiaran'ny Evekan'i Oran, Pierre Claverie, ka namoizany ny ainy teo no ho eo sy ny mpamiliny.
Tsy ny Islamika hiringiriny irery no nikendry ny Kristiana any Alzeria; fa ny fanjakana mihitsy, tamin’ny alalan’ny fitondrana isankarazany, izay nandray anjara tsy azo lavina tamin’ny fanakanana sy faneriterena azy ireo.
Araka ny tatitry ny Vaomiera Amerikana misahana ny Fahalalahana Ara-pivavahana Iraisampirenena tamin'ny taona 2018, niharan'ny famoretan'ny fanjakana ny Kristiana tany Alzeria izay niafara tamin'ny fanakatonana fiangonana am-polony mahery tamin'ny taona 2017, ary mbola nitohy ny fanakatonana ny taona nanaraka izay. Hatramin'izao, tsy mbola nosokafana ireo fiangonana ireo, ary tamin'ny volana Jona, dia nanolo-kevitra ny vaomiera mba hampidirana an'i Alzeria ao amin'ny lisitry ny fanaraha-maso ataon'ny Departemantam-panjakana.
Ny antokom-pivavahana Kristiana Protestanta no niharan’ireo kapoka nifanesy ireo voalohany indrindra, izay heverin’ny sasany fa noho ny tsy fisian’ny fanohanana ny Eglizy Protestanta—tsy sahala amin’ny Eglizy Katolika, izay manana fiarovana mafy avy amin’i Eoropa.
Olana amin'ny fitaomana ny olona hanaraka ny finoan’ny hafa
Ho an'ny manampahefana Alzeriana, ny antony lehibe indrindra nomeny ho fanakatonana ny fiangonana dia ny fisorohana ny fitaomana ny olona hanaraka ny finoan’ny hafa sy ny fitoriana ny filazantsara izay hiampangany ny fiangonana.
Raha niresaka tamin'ny gazety Alzeriana ElChorouk El Yawmi tamin'ny volana Oktobra 2019 dia nilaza ny governoran'i Tizi Ouzou fa nanapa-kevitra ny hanidy fiangonana izy taorian'ny fitarainan'ny olom-pirenena iray momba ny hetsika mampiahiahy ataon’ny fiangonana. Milaza ny tatitra sasany fa tamin'ny taona 2015, nihoatra ny 380.000 ny isan'ny Alzeriana niova ho Kristiana, avy amin'ny faritr'i Kabylia ny ankamaroany.
Tamin'ny taona 2019, naneho hevitra momba ny fanakatonana tamin'ny fanambarana ofisialy i Sarah Leah Whitson, talen'ny sampana Human Rights Watch Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra:
Tokony hamela ny vitsy an'isa ara-pivavahana hanana fahalalahana mitovy amin'ny finoany amin'ny Miozolomana maro an'isa ny manampahefana Alzeriana. Tokony havela hisokatra indray ny fiangonana rehetra izay nakatona tsy ara-drariny.
Nolavin'ny Minisitry ny Raharaham-pivavahana Alzeriana, Mohamed Issa, ny fiampangana fa manenjika vitsy an'isa ny fireneny. Nambarany fa toeram-panabeazana, trano, na fivarotana manana asa ara-dalàna, saingy novana ho toeram-pivavahana tsy nahazoana alalana ireo trano nakatona.
Manafina ny maha Kristiana azy
Niteny tamin'ny Raseef22 ny tanora Alzeriana Kristiana iray, izay nangataka ny tsy hitonona anarana hoe: “Nisedra sakana maro aho. Sarotra be ny milaza amin’ny olona eto Alzeria fa Kristiana aho.”
Nohazavainy fa tsy mitovy ny zavatra iainan’ny Kristiana ao amin’ilay tany, arakaraka ny faritra: “Arakaraka ny itoeran’ireo tsy manaiky ny fahasamihafana na ny tsy fitoviana eo amin’ny manodidina azy, no vao mainka loza sy feno fandrahonana.” Rehefa nipetraka tany amin’ny faritany efatra samy hafa izy, hitany fa ny renivohitra no tsara indrindra raha ny amin’ny fanekena sy ny fandeferana ara-pivavahana. Raha ny amin'ny fipetrahana any amin'ny iray amin'ireo tanàna anatiny ao Alzeria kosa dia nahatsiaro ho niaina ny mangidy izy: “Norahonana aho, ary nisy olona tsy fantatra nitaky ny hivadihako ho Islamo mba hiantohana ny fiarovana ny tenako […] tena nahita fijaliana aho tamin’izany.”
Nilaza tamin'ny Raseef22 ilay mpikaroka Alzeriana monina ao Kairo, Aziza Saadoun, raha naneho hevitra momba ny toe-javatra iainan'ny Kristiana, hoe:
Mifamatotra amin'ny toetra sy ny mari-panondroana Alzeriana, izay—amin'ny ankapobeny—tsy mahalala ny kolontsain'ny fahasamihafana na ny tsy fitoviana ny halalin'ny krizy, ary sarotra ho azy ireo ny manaiky ny hafa.
Nampiany koa fa nahatonga ny famoronana io mari-panondroana Alzeriana io ny fitomboan'ny hetsika Islamika hiringiriny sy ny fahitan’ny fanjakana ny fiangonana Kristiana ho toy ny sampan-draharaha (fitsikilovana)— ka miteraka fanilikilihana ny vitsy an'isa sy ny fandavana na dia ny zo fototra indrindra aza.